« ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Artova, Bekdig ရဲ့, Suluova, လုပ်ငန်းခွင်ပြုလုပ်ခြင်း Turhal Yesilyurt ဘူတာနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်က Wall မှအမျိုးအစား Panel ကို
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: မီးရထားအလုပ်လုပ်Yaptırılacaktır »
ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်အတွက်အမျိုးမျိုးသောနေရာများအဆင့် Crossing ရော်ဘာ Coating အလုပ်အကိုင်များအတွက် 2,3,4,5 နှင့်7Mıntıkaပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးအက်ဥပဒေ၏အပိုဒ်အရသိရသည်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါအမှတ် 4734 19 နေဖြင့်ချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်။
တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2019 / 372131
ခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 3123090515 / 4311 - 3123115305
2,3,4,5 နှင့်7။ စုစုပေါင်း 5119,96 metretülရော်ဘာ Coating စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင်ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားရေးမှူးMıntıkaအတွက်အမျိုးမျိုးသောအဆင့် Crossing အတွက်
ခ) Place: Mıntıkaအတွက်အမျိုးမျိုးသောအဆင့် Crossing အတွက် 2, 3, 4,5နှင့်7ဒေသဆိုင်ရာရုံးခွဲများ
က) Place: TCDD အထွေထွေညွှန်ကြားမှုညီလာခံခန်းမ 1 ။ ကြမ်းပြင် Hippodrome Caddesi အဘယ်သူမျှမ:306330 ရောဂါ-Çankaya / တူရကီ
ခ) နေ့စွဲနှင့်အချိန်: 09.10.2019 - 10: 00
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: ရော်ဘာ Coating လုပ်ငန်းခွင်အတွက်ပေါ့ပါး-Ulukışlaလူငယ်များသို့အဆင့် Crossing 16 / 07 / 2018 ရထားလမ်းဝယ်ယူရေးအသိပေးစာ TCDD6အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ရော်ဘာအပေါ်ယံပိုင်းအကျင့်ကိုကျင့်အတွက်ပေါ့ပါး-Ulukışlaလူငယ်များသို့အဆင့် Crossing ဒေသန္တရရုံးပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးအက်ဥပဒေ၏ယောဘကိုအမှတ် 4734 19 အပိုဒ်အတွက်ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်အတွက်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်။ တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2018 / 349825 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: Kurtulus ခရိုင် Ataturk ရိပ်သာလမ်း 01120 Seyhan SEYHAN / ADANA ခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 3224536914 - 3224575807 ဂ) E-Mail ကနေရပ်လိပ်စာ: xnumxbolgemudurlugu@tcdd.gov.t သုံးခုသည်) နူးညံ့သောစာရွက်စာတမ်း အင်တာနက်လိပ်စာများကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါသည်: တစ်) သဘာဝတရား, အမျိုးအစားနှင့်အရေအတွက်၏နူးညံ့မှ https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 6-ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်ဘာသာရပ်:2...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: အဆင့် Crossing ရော်ဘာ Coating Yaptırılacaktırခုနှစ်တွင် 04 / 05 / 2015 အဆင့် Crossing ရော်ဘာ Coating Yaptırılacaktır TCDD2၌တည်၏။ အထွေထွေအဆင့် Crossing အတွက်ဒေသန္တရရုံးပိုင်ရှင်နှင့်ဆောက်လုပ်ရေးညွှန်ကြားမှုxnumxbölgMıntıkaအတွက်2114,7 အမှတ်metretülရော်ဘာ Coating ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်ပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးအက်ဥပဒေပုဒ်မ 4734 အညီပွင့်လင်းတင်ဒါလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်။ တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 19 / 2015 49850-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: Marsandiz အပန်းဖြေ 1 Behicbey YENİMAHALLE / တူရကီခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 06005 - 3123090515 ဂ) E-Mail ကနေရပ်လိပ်စာ: orhansetkaya@gmail.co ငါ d) ကိုတင်ဒါစာရွက်စာတမ်းကိုအင်တာနက်လိပ်စာမြင်နိုင်ပါသည်: က) အရည်အသွေး၏နူးညံ့မှ https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 3122111571-ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်ဘာသာရပ် ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: အဆင့် Crossing t ကိုရော်ဘာ (တာယာ) Coating စီးပွားရေးလေလံ 09 / 11 / 2012 အဆင့် Cross ရော်ဘာ (ရော်ဘာ) အင်္ကျီကိုဝယ်ယူရေးအသိပေးစာသမ္မတနိုင်ငံ STATE ရထားလမ်း Administration ရုံးချုပ် (TCDD) အထွေထွေညွှန်ကြားမှု 202 ပမာဏအဆင့်နှောင်းပိုင်း t ကိုရော်ဘာအတွက် (တာယာ) Coating စီးပွားရေးဆောက်လုပ်ရေးအလုပ် 4734 အမှတ်ပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးအက်ဥပဒေ 19 အပိုဒ်အရသိရသည်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်။ တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2012 / 132327 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: TCDD အထွေထွေညွှန်ကြားရေးမှူး 06280 GAR ALTINDAĞ / တူရကီခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 3123243399 - 3123115305 ဂ) E-Mail ကနေရပ်လိပ်စာ: malzeme@tcdd.gov.t ဃ) တင်ဒါစာရွက်စာတမ်း အင်တာနက်လိပ်စာများကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါသည်: တစ်၏နူးညံ့မှ https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2-ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်ဘာသာရပ်) ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: အဆင့် Crossing ရော်ဘာ Coating လုပ်ငန်း 11 / 08 / 2014 STATE ရထားလမ်း Administration (TCDD)5များ၏အဆင့် Crossing ရော်ဘာ Coating စီးပွားရေး TC အထွေထွေဒါရိုက်တာ။5အဆင့်ကိုကူးရော်ဘာ Coating ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်အတွက် ZONE ဇုန်ညွှန်ကြားရေးမှူး7BÖLGစီမံခန့်ခွဲရေးကိုမှန်ကန်ပိုင်ဆိုင်မှုအများပြည်သူဝယ်ယူရေးဥပဒေနှင့်အညီပွင့်လင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအမှတ် 4734 19 အပိုဒ်များကချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်။ တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2014 / 92199 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: INÖNÜရပျကှကျ STATION ကိုလမ်းပေါ်မှ 44070 MALATYA Merkez / Malatya ခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 4222124800 - 4222124820 ဂ) E-Mail ကနေရပ်လိပ်စာ: xnumxbolgeinsaatihale@tcdd.gov.t သုံးခုသည်) နူးညံ့သောစာရွက်စာတမ်း အင်တာနက်လိပ်စာများကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါသည်: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 5-နူးညံ့သော ...
အဆင့် Crossing အတွက်ရော်ဘာ Coating, TCDD အထွေထွေညွှန်ကြားမှု
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: ရော်ဘာ Coating လုပ်ငန်းခွင်အတွက်ပေါ့ပါး-Ulukışlaလူငယ်များသို့အဆင့် Crossing
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: အဆင့် Crossing ရော်ဘာ Coating Yaptırılacaktırခုနှစ်တွင်
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: အဆင့် Crossing t ကိုရော်ဘာ (တာယာ) Coating စီးပွားရေးလေလံ